पञ्चवर्षीय योजना : लक्ष्य निर्धारण तथा प्राप्ती « Today Khabar
प्रकाशित २३ चैत्र २०७५, शनिबार १०:०६
बिराटनगर, २३ चैत । विश्वको अन्य देशहरुमा लागु गरिएको आवधिक विकास योजना नेपालमा पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारित उदेश्यहरु पुरा गर्ने उदेश्यले वि.सं. २०१३ देखि पञ्चवर्षिय योजना बनाएर शुरुवात गरिएको हो । विकास योजना शुरु गर्ने बेलामा लिईएको उदेशयहरु जस्तै उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्घि, भौतिक पुर्वाधारको विकास, आर्थिक स्थायीत्व, उद्योग, वाणिज्य तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारको प्रर्वधन, आर्थिक विकाश हासिल गर्न प्रशासनिक तथा लोक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको स्थापना , बेरोजगारी कम गर्न सहयोग गर्न श्रममा आधारित उत्पादन प्रविधिहरुको शुरुवात तथा स्वास्थय, शिक्षा र आम्दानीको न्यायोचित वितरण जस्ता उद्येश्यहरु हाल सम्ममा पुर्ण रुपमा पुरा हुन नसकेको कारणले आवधिक विकास योजनाहरुले नेपालमा निरन्तरता पाईरहेको छ ।
दिर्घकालीन सोच सहितको प्रन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६÷७७– २०८०÷८१) राजधानीमा शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् २०७५ को २ दिने भेलामा प्रस्तुत गरिएको छ। तर्सथ, यँहा नेपालमा विकास योजनाहरुको संक्ष्पित जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस पहिलो विकास योजना अवधि भरिमा रु ५७ करोड ६० लाख बजेट विकास खर्चको लागी छुटयाईएको थियो, जस मध्ये कुल बजेटको लगभग दुई तिहाई अर्थात रु ३८ करोड २९ लाख मात्र खर्च हुन सकेको थियो। यस योजनाको प्रमुख प्राथमिकता यातायात तथा संचार क्षेत्र रहेको थियो र यस क्षेत्रको लागी कुल बजेटको ३६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुटयाईएको थियो भने दोस्रो प्राथमिकतामा चाँहि कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रको परियोजनाहरुलाई राखिएको थियो, जसको लागी कुल बजेटको लगभग २० प्रतिशत बजेट छुटयाईएको थियो। तर यो अवधीको अन्त्य सम्ममा कुनै पनि पुर्वनिर्धारित लक्ष्यहरु पुरा हुन सकेको थिएन। उदाहरणको लागी १४५० किलोमिटर राजमार्ग बनाउने भनिएकोमा ५६५ कि.मी. राजमार्ग मात्र बनाउन सकिएको थियो।
देशमा उत्पन्न प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थाको कारण १ वर्ष सम्म कुनै आवधिक विकास योजना सरकारले लागु गर्न सकेन। तर्सथ, दोस्रो विकास योजना पञ्चवर्षीय नभई त्रिवर्षिय योजनामा सिमित हुन पुग्यो। यस योजना अवधि भरीको लागी कुल बजेट रु ६१ करोड ५० लाख छुटयाईयो ।यस योजनामा पनि कुल बजेटको ३९ प्रतिशत रकम सहित यातायात तथा संचार क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखियो । दोस्रो प्राथमिकतामा भने अन्य क्षेत्रहरु जस्तै उद्योग, पर्यटन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरु परेको थियो। अवधिको अन्त्यसम्ममा कनै पनि लक्ष्यहरु पर्णरुपमा हासिल हुन नसके पनि सवै पुर्वनिर्धारित क्षेत्रहरुमा केहि सुधारहरु चाँहि पक्कै भएको थियो।
यस अवधिमा विकास परियोजनाहरुको कार्यन्वयणको लागी स्थानिय पञ्चायतको भुमिकालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । यस अवधिको कुल बजेट रु १ खर्व ६० करोड निर्धारण गरिएको थियो र प्राथमिकतामा यातायात, संचार, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक तथा कृर्षी क्षेत्रको विकास रहेको थियो। सामाजमा विद्यमान रहेको असमानताहरुको अन्तय पनि यस योजनको प्राथमिकतामा परेको थियो ।
१०. दशौं पञ्चवर्षिय योजन ा(२०५९– २०६४)
यस योजना पछि लगातार ४ वटा त्रिवर्षीय योजनाहरु तर्जुमा गरिएको थियो। एघारौं योजना (२०६४÷०६५– २०६६÷०६७),बाह्रौं योजना (२०६७÷०६८– २०६९÷०७०), तेह्रौं योजना (२०७०÷०७१ –२०७२÷०७३) र चौधौं योजना (२०७३÷०७४ –२०७५÷०७६) गरेर ४ वटा लगातार ३ वर्षिय योजनाहरु देशमा तर्जुमा गरिएको थियो ।